Spare ZVIMWE & ZVINOGONESESA
Kubatana pamwe nekambani inozivikanwa pasi rese yezvigadzirwa, inovimbisa kekutanga nguva yekuendesa.
C / Z Purlin Roll Achigadzira Machine inotora gearbox drive; mashandiro emuchina akatsiga; adopts post-Anoumba yokuvevura kuitira chigadzirwa unhu uye kudzivisa chengarava deformation.
Chengetedza Rail Rail Roll Achigadzira Machine
1. Yakareruka chimiro mune yakasarudzika mhando, nyore kuisa, uye kugadzirisa.
2. Kugamuchira epamberi epasirese anozivikanwa mhando zvigadzirwa muzvipenga, zvikamu zvemagetsi, uye zvikamu zvekushanda.
3. Kumhanya mune yakakwira automatization uye yekudzidzira, hapana kusvibiswa
4. Hapana kudikanwa kwenheyo, nyore kushanda
Kwete: Rondedzero yezvinhu
1.Suitable Chinyorwa: Colored Simbi ndiro, kwakakurudzira simbi
2.upamhi mbishi zvinhu: 1250mm